Adeegga OEM - Xuzhou Roc International Trading Co., Ltd.
Si loo hubiyo in alaabada looxyada ROC OEM ay marwalba qabsan karaan isbeddellada moodada oo ay ka hor mari karaan tartamayaasha kale. Waxaan aasaasnay ​​R&D Center oo ay la socdaan 12 injineer oo naqshadeynaya isla markaana horumarinaya alwaaxda, diyaarna u ah inay adeeg wanaagsan u fidiyaan macmiilkeenna isla markaana kor u qaadaan tartankeenna. Waxaa naga go'an inaan ka caawinno macaamiisheenna inay horumariyaan muuqaalkooda sumcadda ganacsiga, kor u qaadaan qiimaha astaanta, iyo in la gaabiyo horumarka LT, hoos u dhigista qiimaha wax soo saarka. Waxaan bixin karnaa hal adeeg oo OEM / ODM ah. 5-tii sano ee la soo dhaafay, kooxdii weyneyd ayaa gaartay guul weyn. Kiisas badan ayaa macaamiisha aqbaleen waxayna ka caawiyeen inay qabsadaan saamiga suuqa.
Waxaan leenahay kuweenna warshad plywood / warshad OSB / warshad MDF iyo warshad wax soosaarka LVL, Warshada Qalabaynta si loo daboolo soosaarka OEM ee macaamiisha looga baahan yahay. Soo saar bille ah illaa 70000CBM (PLYWOOD, OSB iyo MDF iwm).
Waxaan leenahay habka xakamaynta tayada gudaha ee adag ee kormeerka alaabada ceyriinka ah, kormeerka wax soo saarka iyo kormeerka shixnadaha hore. Tani waa in la hubiyo in badeecadeenu ay la kulmi karto macaamiisha macaamiisha loo baahan yahay iyo alaabadaada OEM ay ku kalsoon yihiin tayada. Our warshad maray ISO9001 iyo waxyaabaha our helay CE, FSC, JAS-ANZ ， PEFC, BS iwm shahaadooyinka. Waxaan aaminsanahay kaliya tayada wanaagsan markaa waxaan ku guuleysan karnaa kalsoonida macaamiisheena.
Iyada oo sannado ah khibrad dhoofinta, waxaan la tacaali karnaa nidaamka ku dhawaaqida kastamka si habsami leh oo waqtigana u diyaarin karnaa gaadiidka maxalliga ah si loo hubiyo waqtiga bixinta macaamiisheena. Dhamaanteen waxaan aaminsanahay in adeegga ugu fiican uu yahay qodobka ugu badan ee soo dejinta si loogu guuleysto kalsoonida macaamiisheenna maalmahan.
Ku bilow ganacsigaaga cusub plywood tayo sare leh, OSB iyo MDF. Aynu ka dhigno alaabadaada OEM / ODM oo aan kor u qaadno ganacsigaaga. Fadlan hadda la xiriir ROCPLEX.
Nidaamka OEM / ODM
Waa maxay nidaamka looxyada ROCPLEX loox OEM / ODM?
1. Falanqaynta shuruudaha
Tallaabada koowaad ee horumarka, kooxdayada wax soo saar waxay diyaar u yihiin inay ku lug yeeshaan falanqaynta shuruudaha. Macaamiisha qaarkood oo leh fikrad aan la taaban karin, sida guddi loox oo loo isticmaalo supermarket ama loo isticmaalo goobta dhismaha, waxaan u diyaarin doonaa kooxdeena injineernimada, kooxda suuq geynta si ay u bixiyaan talooyinkooda xirfadeed si loo hubiyo in sheyga uu la kulmo rajada suuqa.
Tallaabadan, waxaan ku samaynaynaa liistada astaamaha la doonayo ee looxaantaada.
2. Dib u eegis farsamo
Iyada oo liis adag ay ku qoran tahay dabeecadda la doonayo, kooxdayada wax soo saar, oo ay weheliso waaxda wax iibsiga, waxay la xiriiraan alaab-keenayaasheenna, si ay u sameeyaan warqad qaabeyn oo faahfaahsan ka kooban.
Marxaladdan, waxaa suuragal ah inaan dib ugu laabanno marxaladda koowaad sababo la xiriira suurtagalnimada ama arrin kharash-ku-ool ah.
3. Qiimaha iyo Jadwalka
Iyadoo lagu saleynayo cilmi-baaristii hore, ROCPLEX waxay bixin kartaa foom lacag-bixin iyo jadwal, taas oo aad ugu kala duwan astaamaha la doonayo, tirada iyo awoodda wax-soo-saarka sahayda.
Marxaladdan, waxaan la saxiixan karnaa qandaraaska rasmiga ah.
4. Horumarinta Muunad
ROCPLEX waxay samayn doontaa muunad, sida loo yaqaan muunad injineernimada, oo ka shaqeysa dhammaan jilayaasha la naqshadeeyay. Muunadani waxay markaa ku xiran tahay baaritaanka karkarinta, tijaabada xasilloonida, tijaabada xoogga iyo baaritaanka adkeysiga.
Waxaan ku dhiirrigelinaynaa macmiilka inuu ka qaybqaato horumarka si uu u bixiyo jawaab celin degdeg ah.
5. Amarka Imtixaanka
Muunad injineernimo ku qanacsan, waxaan u gudbi karnaa marxaladda tijaabada-soo-saarista. waxaan qiimeyneynaa halista ka imaan karta isku xirnaanta wax soo saarka ballaaran, kalsoonida alaab-qeybiyaha iyo jadwalka wax soo saarka ballaaran.
6. Soosaarid Ballaaran
Iyada oo dhammaan dhibaatooyinka la xalliyey oo halista la ogaaday, waxaan geleynaa marxaladdii ugu dambeysay ee wax soo saar ballaaran.